औंलाबाट थाहा हुन्छ युवतीका प्रेमी कति ? « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
औंलाबाट थाहा हुन्छ युवतीका प्रेमी कति ?
यहाँ हामीले समुन्द्र शास्त्रमा उल्लेख गरिएका स्त्रीका केही विशेषताहरु उल्लेख गरका छौं । शास्त्र अनुसार जुन युवतीका हात तथा खुट्टाको औंला लामा– लामा हुन्छन् त्यस्ता युवतीहरु धोकेबाज हुन्छन् । उनीहरुले आफ्नो प्रेमीलाई जुनसुकै बेला धोका दिन सक्छन् ।
प्रकाशित मिति : २० आश्विन २०७७, मंगलबार १२ : ५५ बजे